बालबालिकालाई डेटाको गोपनीयता सिकाउन यसकारण छ आवश्यक - Tech News Nepal Tech News Nepal
१ लाखले खोले ‘नविल जेन-एन अकाउन्ट’, हरेक ग्राहकका
बुधबार, चैत्र २५, २०७७ २०:२३
स्मार्टफोनमा ब्याट्री चार्ज गर्दा जान्नैपर्ने कुराहरु
दराजको मातृ कम्पनी अलिबाबालाई ३३४ अर्ब जरिवाना
न्युरोलिङ्कको ब्रेन चिप प्रत्यारोपण गरिएको बाँदरले गेम खेल्दै
वातावरणका लागि यसकारण हानिकार छ बिटक्वाइन माइनिङ
वर्ल्डलिंकको वार्षिक इन्टरनेट र टिभी प्याकेजमा ६२ प्रतिशत
रकेटको विषयलाई लिएर डा रामेश कोइराला र महाबिर
भारतमा बनेका मोबाइल खरिद नगर्न टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकको
गुगल म्यापमा यसरी राख्नुहोस् आफ्नो घर, कार्यालय वा
नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरबाइकको बिक्री सुरु हुँदै
नयाँ मोबाइल किन्दा टेलिकमको फोरजी चल्छ कि चल्दैन
मोबाइलमै ह्याकिङ सिकेका सुजन, जसले ३ महिनामै तिरे
आफ्ना ७५ हजार राइडरका लागि पठाओले जारी गर्‍यो
देशकै ठूलो डेटा ह्याकमा संलग्न नरपिचास भन्छन्, ‘नेपालको
बालबालिकालाई डेटाको गोपनीयता सिकाउन यसकारण छ आवश्यक
काठमाडाैं । अभिभावकको अनुमति बिनै अवैधानिकरुपमा युट्युबबाट बालबालिकाहरुको डेटा संकलन गरेपछि गुगलले १७ करोड अमेरिकी डलर जरिवाना तिनुपर्‍यो । बालबालिकाको अनलाइन गोपनीयता संरक्षण ऐन-कोप्पाको उल्लंघन अन्तर्गत गुगलले यो जरिवाना भरण गर्नुपरेको हो ।
अमेरिकाको संघीय व्यापार आयोग र न्युयोर्कको स्टेट अटोर्नी जनरलले गुगलविरुद्ध उक्त मुद्दा ल्याएको अगाडि बढाएका थिए । अब बालबालिका सम्बन्धि जुनसुकै किसिमको डेटा संकलन वा सेयर गर्दा युट्यबुले अनिवार्य रुपमा अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
हाम्रो डिजिटल पहिचानको रुपमा हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुको डेटाहरु संकलन भइरहेको हुन्छ । आजभोली बालबालिकाहरु डेटा संकलनको निशाना बन्दै आइरहेका छन् । जसको प्रयोजनबारे हामी अझै‌ अस्पष्ट नै छौं । त्यसो त हामीलाई अहिलेसम्म यसको परिणाम के हुनसक्छ भन्ने कुराको छनक पनि छैन ।
ठूला प्रविधि कम्पनी र मिडियाहरुले गोपनीयता सुरक्षार्थ बनाइएका प्रावधानहरुलाई उल्लंघन गर्न कसरी डार्क प्याटर्न डिजाइनको प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा भइरहेको एउटा अनुसन्धानले बालबालिकाहरुको डेटा संकलनको अवस्था कतिको भयावह छ र यसलाई क्यानडाले कसरी पराजित गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।
वयस्कदेखि बालबालिकाहरुसम्मले अनलाइनमा गर्ने सर्च, कुनै एप प्रयोगमार्फत गरेको विक्री वितरण वा क्रस ब्राउजर फिंगरप्रिन्ट, सबै कुराबाट गुगलले हाम्रो डेटामा एक्सेस पाउँछ । अभिभावकले पनि बालबालिकाका लागि अनलाइनमा कुनै सामान खरिद गर्दा होस् वा नयाँ अकाउन्ट सेटअप गर्दा, डेटा राखिरहेकै हुन्छन् ।
अमेरिका र क्यानडाका बालबालिकाहरुले निरन्तर रुपमा एउटा यस्तो प्लेटफर्ममा आफ्नो सूचना दिईरहेका छन् जहाँबाट गुगलले त्यहीँ सूचना प्रयोग गरिरहेको छ ।
गुगलले २०१२ मा शैक्षिक जगतमा प्रवेश गर्‍यो । अहिले उसले अमेरिकामा शैक्षिक प्रविधि बजारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएको छ । यससँगै गुगलले नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मका बालबालिकाहरुको डेटाको एक्सेस उनीहरुको अभिभावककै संरक्षणमा पाइरहेको छ ।
गुगलकै प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेटले युट्युब किड्समार्फत बालबालिका लक्षित सामाग्रीहरुमा कब्जा जमाएको छ । साथै गुगल डक्स, जी सुइट, क्रोमबुक्स र त्यसलाई प्रयोग गर्न आजश्यक जीमेल अकाउन्टमाफर्त अनलाइन शैक्षिक क्षेत्रमा उसले उपनिवेश नै जमाइसकेको छ ।
यसरी गुगल शैक्षिक सामाग्रीदेखि, युट्युबहरु जस्ता मनोरञ्जनका सामाग्री, सर्च हिस्ट्रीसम्मबाट बालबालिकाको डेटामा पहुँच पुर्‍याउँछ । शैक्षिक प्रविधि प्रयोगको आकारलाई हेर्दा एकदमै धेरै ठूलो छ । २०१२ देखि २०१६ को अवधिमा गुगल क्रोमबुकले अमेरिकाको स्कुल बजारमा मात्र ५० प्रतिशत बजार लिइसकेको छ । अहिले अमेरिकाका कक्षा कोठाहरुमा ३ करोड क्रोमबुक प्रयोगमा छन् ।
२०१७ सम्म अमेरिकाका विद्यालयहरुमा ५८ प्रतिशतसम्म खरिद भएका उपकरणहरु गुगलका थिए । आठ करोडभन्दा धेरै विद्यार्थी बालबालिका तथा प्रशिक्षकरुले त्यसलाई विश्वभरी नै चलाउँछन् । २०१५ मा इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउण्डेसन ईएफएफले ट्रेड कमिसन उजुरी दर्ता गरेको थियो ।
त्यसको पछाडिको कारण के थियो भने क्रोमबुकको डिफल्ट सेटिङले गुगललाई प्रयोगकर्ताकाहरुको डेटा संकलन गर्न छूट दिएको थियो । जसबाट उसले वेभ ब्राउजिङको इतिहास, सर्च इंजिनको रिजल्ट, युट्युब हेर्ने बानी र सेभ भएका पासवर्डसम्ममा पहुँच पुर्‍याउन सक्थ्यो ।
जीमेल अकाउन्ट आज विद्यालयहरुमा स्ट्याण्डर्ड अभ्यास बनिसकेको छ । विद्यालयमा अविभावकको अनुमति बिना विद्यार्थीहरुको व्याक्तिगत विवरण समेटेर जीमेलमा राखिन्छ्न् । जसलाई गुगलले उनीहरुको जानकारी बिना नै पहुँच बनाइरहेको हुन्छ ।
गुगलले डेटा कलेक्सनको एउटा गतिशिल र समयसान्दर्भिक प्रणाली बनाएर बालबालिकाको भविष्यलाई एक किसिमले आफ्नो चंगुलभित्र राखिसकेको छ । यो संकलित डेटा भविष्यमा कसरी प्रयोग हुन्छ हामीलाई थाहा त छैन तर विज्ञापनले स्वभावमा पार्दै लगेको प्रभावलाई भने हामीले चिन्दै आएका छौं ।
२०१९ को मार्चमा अमेरिकी सिनेटर इद मार्केर जोश हाउलेले एउटा बाइपार्टिसन बिल सिनेटमा पेश गरेका थिए । जसको उदेश्य कोप्पालाई अपडेट गर्नु थियो । जसमा बालबालिका लक्षित विज्ञापनलाई प्रतिबन्ध लगाउने, गोपनीयता सुरक्षाको १३ देखि १५ वर्षसम्मको सीमालाई बढाउने ता की उनीहरुको अनुमतिबिना कसैले पनि डेटामा पहुँच पुर्‍याउन नसकुन् ।
यदि यो विधेक पास भएको खण्डमा यसले गुगल र फेसबुकको डिजिटल बजारबाट हुने आयमा ठूलो असर पार्नेछ । २०१८ मा यसको आय एक खर्ब ७० करोड डलर रहेको थियो । अब विश्व प्रविधिको क्षेत्रमा बालबालिका तथा युवाहरुको डेटा गोपनीयता कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गराउन नेपाल जस्ता मुलुकले समेत समयमै सजग हुन जरुरी भइसकेको छ ।
कम्प्युटरमा के माइक्रोसफ्ट डिफेण्डरले पर्याप्त सुरक्षा दिन सक्ला ?
काठमाडौं । कम्प्युटर डिभाइसलाई माल्वेयरविरुद्द जोगाउन कुनै समय माइक्रोसफ्ट डिफेन्डरलाई एउटा कमजोर रक्षकको रुपमा लिइन्थ्यो
५० करोड लिंकडिन प्रयोगकर्ताको डेटा बिक्रीका लागि अनलाइनमा
काठमाडौं । सायद तपाईंमध्ये धेरैजना अझै पनि ५३ करोड ३० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको डेटा ब्रिच
यस्तो छ ५३ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटा लिकको असली कारण
काठमाडौं । केही दिनअघि फेसबुकको ५३ करोड ३० लाख प्रयोगकर्ताहरुको डेटा इन्टरनेटमा लिक भयो ।
कलाकारको फेसबुक आईडी ह्याक गरी रकम माग गर्ने १४ वर्षीय किशोर पक्राउ
काठमाडौं । केही हप्ताअघि चलचित्र कलाकारहरुको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गरी रकम माग गर्ने व्यक्ति पक्राउ
वर्ल्डलिंकको वार्षिक इन्टरनेट र टिभी प्याकेजमा ६२ प्रतिशत छुट
नयाँ मोबाइल किन्दा टेलिकमको फोरजी चल्छ कि चल्दैन ? यसरी चेक गर्नुहोस्
भारतमा बनेका मोबाइल खरिद नगर्न टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकको आग्रह
रकेटको विषयलाई लिएर डा रामेश कोइराला र महाबिर पुनबीच ट्वीटरमा जुहारी
गुगल म्यापमा यसरी राख्नुहोस् आफ्नो घर, कार्यालय वा पसलको लोकेसन
के हो डार्क वेब ?
महाबिर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई कसरी बुझ्ने ?
वृद्धाश्रमलाई टेलिकमका कर्मचारीको खाद्यान्न र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री